Mark Bowden oo Garowe kula kulmay Madaxda Puntland.
Mark Bowden oo Garowe kula kulmay Madaxda Puntland
Wefdi oo heer Caalami ah oo uu Hogaaminaayo Xiriiriyaha bani,adamnimada Qaramada Midowe ee Soomaaliya Mark Bowden ayaa kulan albaabada u xiranyahay kula qaatay xarunta madaxtooyada madaxweyne Faroole iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada.
Madaxweynaha iyo Mark Bowden oo markii uu kulankaasi soo gaba gaboobey kadib saxaafadda si wada jir ah shir u qabtay ayaga ka warbixiyey waxyaabihii ay isla soo qaadeen.
Dr. Faroole oo ugu horeyn hadalka qaatay, ayaa xusay in waxyaabaha ugu waaweyn ee ay wefdiga Qaramada Midoobey ka socda ka wada hadleen ay kamid yihiin: sidii wax looga qaban lahaa deegaanada ay abaaruhu ka jiraan ee ku yaal dhulka xeebaha ku teedsan ee Puntland iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha dadka barakacayaasha ah sidoo kale mashaariic horumarineed oo looga fulin lahaa deegaanada laabka ah ee ka durugsan jidka weyn ee gobolada degaankaas isku xira.
Mark Bowden,Xiriiriyaha Qaramada Midoobey ee gargaarka Soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay booqashada uu ku yimid Puntland.